µTorrent Pro v3.4.3 Build 40298 Full - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Computer software Downloader PC Downloader Torrent Downloader µTorrent Pro v3.4.3 Build 40298 Full
µTorrent Pro v3.4.3 Build 40298 Full
Maung Pauk at 2:39:00 PM Computer software, Downloader, PC Downloader, Torrent Downloader,
µTorrent Pro v3.4.3 Build 40298 Full : 1.85 Mb
µTorrent ဆိုတာ Internet Download Manager လိုပဲ အင်တာနက်ပေါ်က ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းယူပေးတဲ့ Downloader တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. ထူးခြားချက်တစ်ခုက သာမန်ဖိုင်တွေကို µTorrent နဲ့ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းယူလို့မရပါဘူး.. Torrent Link တွေမှာ တင်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုသာ ဒေါင်းယူလို့ရပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်ပမာဏကြီးမားပြီး IDM နဲ့ ဒေါင်းဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ လင့်တွေကို Torrent တွေနဲ့ တင်ပေးထားလေ့ရှိပါတယ်.. အဲဒီလင့်ကို နှိပ်လိုက်ရင် Torrent ဖိုင်လေး တစ်ခု ကျလာပါမယ်.. အဲဒီ Torrent ဖိုင်လေးကို µTorrent Software နဲ့ဖွင့်ပြီး Download လုပ်ယူရတာပါ.. ခု ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာက နောက်ဆုံးထွက် µTorrent Pro v3.4.3 Build 40298 ဖြစ်ပါတယ်.. Download Speed ကောင်းမွန်ပြီး error ကင်းပါတယ်.. Full Version ဖြစ်ဖို့က ပထမ Setup နဲ့ Install လုပ်ရပါမယ်.. ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်နားက Tray ထဲမှာ µTorrent ပုံလေးကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit လုပ်ပါ. Crack ထဲက dat ဖိုင်လေးကို C:\_Users\_User-Name\_AppData\_Roaming\_uTorrent ဆိုတဲ့ Folder အောက်ကို သွားထည့်ပေးရပါမယ်.. Over Write တောင်းရင် သဘောတူပေးရပါမယ်. User-Name ဆိုတာက ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်..
[ µTorrent ဆိုတာ Internet Download Manager လိုပဲ အငျတာနကျပျေါက ဖိုငျတှကေို ဒေါငျးယူပေးတဲ့ Downloader တဈခုဖွဈပါတယျ.. ထူးခွားခကျြတဈခုက သာမနျဖိုငျတှကေို µTorrent နဲ့ တိုကျရိုကျဒေါငျးယူလို့မရပါဘူး.. Torrent Link တှမှော တငျထားတဲ့ဖိုငျတှကေိုသာ ဒေါငျးယူလို့ရပါတယျ.. ဖိုငျဆိုဒျပမာဏကွီးမားပွီး IDM နဲ့ ဒေါငျးဖို့ အဆငျမပွတေဲ့ လငျ့တှကေို Torrent တှနေဲ့ တငျပေးထားလရှေိ့ပါတယျ.. အဲဒီလငျ့ကို နှိပျလိုကျရငျ Torrent ဖိုငျလေး တဈခု ကလြာပါမယျ.. အဲဒီ Torrent ဖိုငျလေးကို µTorrent Software နဲ့ဖှငျ့ပွီး Download လုပျယူရတာပါ.. ခု ကြှနျတျောတငျပေးလိုကျတာက နောကျဆုံးထှကျ µTorrent Pro v3.4.3 Build 40298 ဖွဈပါတယျ.. Download Speed ကောငျးမှနျပွီး error ကငျးပါတယျ.. Full Version ဖွဈဖို့က ပထမ Setup နဲ့ Install လုပျရပါမယျ.. ကှနျပြူတာရဲ့ ညာဘကျအောကျနားက Tray ထဲမှာ µTorrent ပုံလေးကို ညာကလဈထောကျပွီး exit လုပျပါ. Crack ထဲက dat ဖိုငျလေးကို C:\_Users\_User-Name\_AppData\_Roaming\_uTorrent ဆိုတဲ့ Folder အောကျကို သှားထညျ့ပေးရပါမယျ.. Over Write တောငျးရငျ သဘောတူပေးရပါမယျ. User-Name ဆိုတာက ကိုယျ့ကှနျပြူတာရဲ့ နာမညျဖွဈပါတယျ.. ]
Close uTorrent From System Tray
Go To Installation Directory of uTorrent (Default Directory : C:\_Users\_User-Name\_AppData\_Roaming\_uTorrent)
Copy settings.dat File From Crack Folder in Installation Directory (Replace The File)
Computer software, Downloader, PC Downloader, Torrent Downloader
Computer software Downloader PC Downloader Torrent Downloader